Terms Ary Condition - Talata Match - 50% mitovy hatramin'ny £ 50 |
Terms Ary Condition – Talata Match - 50% mitovy hatramin'ny £ 50
Izany tombony ho mavitrika eo amin'ny 2 – 8faha Febroary 2017 GMT.
Ihany Profit sy fatiantoka (P&L) amin'ny voafantina slot lalao, Superman, The Batman, Justice League sy ny Green fanala eo 00:00 & 23:59 (GMT) amin'ny andro hanisa ny fampiroboroboana mankany amin'ny fahaizana ny Ampitomboina ny.
Ny Ampitomboina ho loka araka ny haratony tombony (tena vola winnings) amin'ny voafantina slots. Ao ny zava-nitranga fa ny haratony P&L dia accrued farafahakeliny ny £ 10 in winnings, ianao dia hahazo ny tosika kajy amin'ny 50% ny lehibe P&L.
Mba ho afaka ny Win Ampitomboina ny, mpilalao dia tsy maintsy nanao farafahakeliny fametrahana ny £ 10 amin'ny andro sy ny fampiroboroboana wagered amin'ny Superman, The Batman, Justice League sy The Green fanala.
Maximum tanteraka Win tosika vola dia £ 50 in tombony-bola.
Standard tombony wagering fepetra ny 30x ny tombony vola mihatra alohan'ny tombontsoa na Tsikirity winnings azo alaina.
Bonus vola azo avy amin'izany
fisondrotana, ihany no ampiasaina mba hilalao eo amin'ny slot lalao.
Mpilalao ireo ary tsaroako fa ny iray ihany dia afaka ny ho mpanao tombony na oviana na indray mandeha, masìna ianao, mankanesa any “ny kaontiko” fizarana hijery ny tombony manontolo filaharana
General Fepetra apply.Management ny fanapahan-kevitry ny farany amin'ny rehetra, toe-javatra.
Terms Ary Condition – 50% Win Boost New game…
Terms Ary Condition – 50% Win tosika hatramin'ny £ 100
20% Win tosika Daily Cleo Plus loha-hevitra niakatra ho any £ 200